Ondulin: achiisa, kugadzwa instructions, zvinhu ehupfumi
Denga ndicho chinokosha pamba upi, nokuti yakagadzirirwa kudzivirira kwakavakirwa kubva zvinokonzerwa weathering. Kana totaura padenga pamba, pano, kunze rakavimbika, zviri zvikuru, uye chitarisiko chawo. Property dzinovaraidza kuedza kusarudza ichiita mabasa akawanda, aesthetic uye vafuke painoperera. It anosangana zvose izvi zvinodiwa evroshifer (ondulin). Kuisa zviri nyore, uye mashoko ane wakanaka mabasa unhu kuti zvinyatsoshanda dzakakurumbira uye rakakurumbira Kishi munyika uye Europe.
Chii saka chakanaka ondulin, umo chinoitwa uye sei kunzwisisa kwayo kugadzwa? Izvi uye dzimwe nyaya zhinji nechokuita ichi mhando denga, tichakurukura munyaya ino.
Chii evroshifer uye sei kugadzirwa
Zvichida, chimwe nechimwe muridzi private imba, pamberi rwokutenga, kana zvimwe denga chifukidzo, zvichava kubvunza unhu uye zvinhu izvo zvinonzi zvakaitwa. Vakawanda vanoshamisika, asi sezvo huru mbishi zvakashandiswa ari gadzira Ondulina, anoita kwakajairika chakatsikirirwa tsvina mapepa.
The Yakanatswa tsvina bepa akawedzera siyana chicherwa fillers, uye chakaita zvokugadzirwa nebwe pamwe coloring pigments. The zvichiguma machira pasi kumusoro kumanikidzwa akaiswa mushonga wokuuraya bhitumini, izvo zvinoita kuti ndakasimba uye husingakwanisi ratinoona mananara.
Unhu Main mashoko
In chitarisiko bhitumini machira vari chaizvo zvakafanana nguva dzose dombo, asi kana tikatarisa zvekushandisa nokurondedzerwa, uchaona zvinoverengeka kusiyana. zvinoti:
1. Mumwe zvikuru moto-nemakadhibhokisi anonzi ondulin. Kuisa rinogona kuitwa musi asiri zvinobata moto chawo bedzi. Pamusangano tembiricha dzinopfuura 250 madhigirii bhitumini unhani nokukurumidza dzakaparira, zvichiita zvisingaiti kushandisa pamusoro pamatenga muzvikoro, kindergartens, makiriniki nemamwe masangano.
2. Kusiyana pabhodhi, wt Ondulina mumwe jira hakuiti kupfuudza 6.5 makirogiramu. Nyaya iyi inogona kunzi muchikwata kupfuura evroshifer lightweight zvinhu kuti havana hombe mutoro pamusoro truss hurongwa. Ondulina nokuiswa padenga zvinogona kuitwa namaoko ake, pasina chinokosha midziyo uye vakawanda vabatsiri. Rokutakura zvinhu hakurevi kuti havashandisi mari yakawanda, saka machira anogona agoiswa nzvimbo uchishandisa motokari yako.
3. Ondulin, kuisira inokurukurwa zvakadzama bepa iri angakudzivisai mutoro panyama kukuru (960 makirogiramu / ba. M). Denga haisi pasi deformation, husingakwanisi simba gusts kwemhepo uye kwete kurasa simba pasi pokudzora echando uye makuru akaturikidzana echando.
Kuti zvakanaka kuverenga Ondulina (kusarudza zvakarurama uwandu zvinhu), unofanira kuteerera kukura jira chete. Nhasi, vagadziri kubudisa zvigadzirwa zvinotevera sizes:
• Kureba jira iri 2000 mm;
• jira rimwe nerimwe ichocho akaenzana 960 mm;
• uyere jira ukobvu kuri kuwanda 2.8-3.2 mm;
• danho chinozunguzirwa akaenzana 95 mm;
• chinozunguzirwa kukwirira - 36 mm;
• pane imwe jira iri 10 nemafungu;
• unobatsira nharaunda mumwe chaikosha kunoenderana pakona rimwe kwakarerekera padenga uye zvinogona 1.29 / 1.54 / 1.56 mita.
Color gamut evroshifer kashoma kunzi nzwisisika. Kazhinji kacho pane zvokutengeserana mapuriro vanogona kusangana tsvuku, girini, vatema uye mashava ondulin. Mavara kazhinji muted, asi pamusoro pamatenga edzimba zvinhu anotarira anokwezva zvikuru. Kuvapo vashoma mavara hakutadzisi kunhonga padenga, izvo zvichaita kuti vakabudirira pamwe ane France weimba uye mamwe zvivako.
Kusarudza evroshifer, hazvina zvakakodzera kuti pfungwa chete pamusoro Ruvara mashizha, vanonyatsoteerera chigadzirwa unhu uye rakavimbika mugadziri. Enzanisa verenga pachiimbwa mienzaniso inoverengeka nyoro padenga.
Haufaniri kupa sarudzo zvakare chisingakoshi zvigadzirwa, nekuti kana mutengo ari kutarisira understated, zvinoreva kuti kambani iri chinhu kuponeswa. Kazhinji mari idzi zvakananga kunokanganisa madzidziro zvokunyama uye ayo upenyu basa.
Nhasi kune zvitoro zhinji apo unogona kutenga unhu ondulin ( "Leroy Merlin", "Castorama", "Maksidom", OBI, etc ..). Zvinodzidzisa guru zvakawanda nebhitumini nemakadhibhokisi kubva vagadziri siyana. Huru chitoro maketani anogona kuwanikwa zvibereko mavara zvose zvinobvira, kunze zvakachengetwa makuru kukoshesa zita ravo zvechokwadi uye edza kuti atengese chete vanopupurirwa zvibereko zvakanaka yepamusoro. Saka kana uchida kutenga yepamusoro ondulin, "Leroy Merlin" uye akafanana zvitoro kuzoshanyira kutanga.
Kufukidza denga ne bituminous machira - Mari-kunobudirira mhinduro. Ondulina vagadziri kupa makore 15 garandi pamusoro zvinhu zvayo. Zvisinei, tsika rinoratidza kuti wakaoma zvaidiwa chokugadza kwakafanira ruzivo nemakadhibhokisi kwakadaro anogona kushumira emakore anopfuura mashanu. Naizvozvo, unogona zvakachengeteka kutaura kuti kutenga evroshifer mari dziri mhosva.
Kana isu kutaura nezvedzimwe nhamba, avhareji yemari ondulin nhasi kunosiyana-siyana mukati 350-500 rubles.
Uyewo hwokupedzisira chitsama zvinhu zvinotevera:
1. Hurongwa vhoriyamu. Nokuti Wholesale vatengi mutengo inowanzopiwa kuderedzwa zvishoma.
2. Distance emakambani unobereka nebhitumini nemakadhibhokisi. Zvichidhura rokutakura zvinhu (kubva mugadziri kusvika nokutengesa) nguva dzose kuiswa mutengo zvigadzirwa.
3. Hue, ndiko kupendwa ondulin. Color machira ane zvakananga kukanganisa yokupedzisira mutengo. Izvi imhaka yokuti zvinodhura dhayi michina inoshandiswa kugadzirwa mavara evroshifer.
Yeuka, kuwedzera kune mukuru denga remba, unofanira siyana zvinoriumba (bhiza, flagon, mukoko nechifukidzo epuroni namira eaves uye zvichingodaro.). kukosha kwavo kuti vanobatanidzwa kufungidzira. Usakanganwa pamusoro zvipikiri kuti Ondulina. Zvinofanira kucherechedzwa kuti vakasiyana zvatinosiita pabhodhi zvipikiri, saka sarudzo dzavo, tichakurukura ariega.
Fasteners nokuti evroshifer
Special zvipikiri nokuti Ondulina kuzivikanwa nokuva nguwani akagadzirwa polypropylene kana polyvinyl chloride. Zvinokosha kuti vose zvokunyama zvakakwana husingakwanisi UV uye kuti tembiricha nokufamba.
heti ikawanda anopa zvakakodzera tightness pamusoro nemakadhibhokisi uye rakavimbika fastening, izvo zvisina kuputswa kunyange kana gusts akasimba mhepo.
A concave chimiro kunoita maximally gobvu gasket kutara fasteners pamusoro jira, uye kuvapo mapurasitiki chivharo pamusoro chivharo anobvumira chipikiri kudzivirira undesired kuonana nemvura.
The simbi Chikamu fastening chinhu chakagadzirwa kabhoni simbi. Its kureba 70-75 mm kazhinji uye dhayamita iri 3.5 mm. Chipikiri pachayo zvinenge zvakazara rwokudzivirira zingi mhinduro iyo inoita chigadzirwa akatsiga kusvikira ngura.
Uchishandisa dzinokosha nezvipikiri yechigarire Ondulina kuwana yepamusoro uye yakasimba zvakakwana.
The kumbopeta jira chete, unofanira dzinenge 20 fasteners.
Apo vose anodiwa zvinhu kare akatenga, unogona endai kugadzwa kwavo. Vaya kuronga vanoripira nyanzvi Roofer vanofanira kuziva kuti mabasa avo achaita mari kubva 700-800 rubles muzana mativi mamita. Kunyange zvakadaro, kuti nokukurumidza ruzivo nyanzvi uye zvakarurama yakanga yakazara ondulin. Maoko enyu kuchakubatsira kudzivisa mimwe mari, asi sei kuita basa pachavo, tichakurukura zvimwe munyaya ino.
Kuisa Ondulina padenga rinotanga nekugadzirira nechigadziko, iyo anoita somunhu yemapuranga crate. Kazhinji, ayo namo iri masendimita 45, asi zvichienderana pakona pakati zvinodiwa denga, daro ichi inogona kugadziriswa. Saka, ngationei kuti sei nzira dzekuziva kunorondedzerwa danho ruchava pasi crate ondulin.
1. Kana mwero trusses materu idukusa 10 madhigirii, zvakakodzera kuisa yakasimba nehwaro plywood, OSB mapuranga kana kwamahwendefa. Muchiitiko ichi evroshifer vakaprofita machira ukapisa murwi mafungu maviri. Upper pabhodhi inofanira kuva masendimita 30 kusvika pasi. mazano aya dzinofanira kuzokurukurwa vaya vasingagoni edza sei kuisa ondulin pamusoro rakadeurwa padenga. nzira iyi nokuturika iri kupfuura yaiwanzoshandiswa asiri dzinogarwa zvivakwa.
2. Kana pakona rimwe nepfungwa iri 10 kusvika 15 madhigirii, pasi crate ondulin akasiya increments pamusoro masendimita 45. Magadzirirwo pacharo inounganidzwa kubva mazariro 5 x 5 masendimita kana 4 X 6 cm. The machira kufukidza rapfuura wave 1, uye kureba nerimwe kuenda mumwe masendimita 20.
3. Muzviitiko apo mafungiro angled kwazvo madhigirii 15 ari nhamba Step batten iri vanenge 60 cm. The bindepinde chinozunguzirwa rinoitwa musi iwoyo wavelength, uye hunyambiri bindepinde akaenzana masendimita 17.
4. Kana padenga paine rounding, crate ngaakushongedzei nezvinhu kakawanda increments. Izvi kuitira kuti munzvimbo idzi mashoko anogona anowanzoita kukunda kunetseka siyana.
Unofanirawo kuteerera mugadziri wacho vanorumbidza, izvo kugadzirwa ari ondulin. Installation Instructions ari pasuru, kazhinji rinoratidza kufadza zvinogoneka uye shoma zvinobvumidzwa danho crates.
Cherechedza kuti kugadzwa battens kunofanira kuitwa panguva tembiricha kwete pe2 madhigirii, sezvo panguva yakaderera tembiricha matanda ruchigona kutsemuka.
Hurongwa Kugadzira Ondulina
Panguva kuisa akaturika zvose mitemo uye nhungamiro kushanda ichi zvinhu zvinofanira kuchengetwa. Zvishoma zvokutsauka kubva nokuisa ruzivo kunotoreva nokukurumidza kukundikana unhani, zvichiguma kutambisa dzokuwedzera.
Ondulina nokuiswa pedenga kunosanganisira zvinotevera mabasa:
1. Top kunhonga zvose zvinhu uye kubika nematurusi.
2. Kuisa mapuranga kutanga kubva murwere pamupendero (wayo pasi divi) riri pakatarisana vhuvhuta divi.
3. musara yokutanga akatasva mu maonero eaves, wechipiri Vakaisa checkerboard muenzaniso.
4. Kana kugadzwa mutsara machira akaronga kuti pakona akaumba haana bindepinde zvina, uye machira vatatu wechipiri. Nokuti ichi, kutanga semucheka anoiswa kwete Ondulina wayo nehafu.
5. The zvipikiri (kurudyi pamakona) vari nomuzvanza rokumusoro pakati ondulin wave. Pamwe yepazasi kumucheto jira fastener iri nomuzvanza nomumwe chinozunguzirwa, uye yapakati chikamu akarovererwa sheathing ari checkerboard muenzaniso.
6. tora chiduku block huni, vakamuradzika sefungu inoyerera kuti zvinangwa izvi kana iri kosi basa panodikanwa dzokubvisa kare Akarovera nezvipikiri. It nzwara abut uye neatly kubviswa pabhodhi tsvina fasteners.
7. Kuti kuisa mipata kuvaka mamwe crate. Basa kuitwa zvikuru nokukurumidza kana mukashandisa zvinhu kubva chete kambani kuti kugadzirwa ari ondulin.
8. Ridge chaikosha zvakare zvakanakisisa kutenga chepakutanga. kugadzwa kwavo vakatapwa downwind. The bindepinde anofanira kanenge 12,5 cm. Fasteners vari nemhepo zvose mafungu jira, pamwe unobva muhomba.
9. pokusvika nzvimbo padenga nemadziro eimba inochengeterwa zvinhu kwave kushandiswa zvose mumipata. The vazvo vari zvinenge zvakazara silicone sealant.
10. mukoko kushongedzwa yakagadzirwa inokosha mukoko zvinhu. Vari akapeta uye yakasimbiswa kuti bhodhi uye mukoko micheto Ondulina papepa.
11. The pokusvika site pabhodhi pamwe kufefetedza uye putira chimneys silicone uye akavharwa ne rokufukidza epuroni. kuda kwake rinoitwa pasi rose nemafungu.
Kufefetedza uye denga idonhe
Ondulina kuisira zvemichina kunosanganisira kuurayiwa mabasa kuitira kuvimbika padenga uye ndinosika dzinongoitika kufefetedza reimba. Izvi zvinodiwa hazvigoni kungotariswa. Nei tichifanira Implementation yavo?
Nemhaka yokuti munguva mudzimu pedenga reimba inodziya mhepo rinobuda, izvozvo vokukurukura kwechando aibuda, mauri condensation Vakazopinda pamusoro crate. Nokuda matanda iri rinotanga kuora, izvozvo usisavaviri uye padenga anogona richaparara. Ndokusaka zvakakosha chaizvo kuita mhepo vent, izvo zvichaita kuti kuunganidza mwando pasi flooring.
Vari akaisa pasi yepazasi yakatenuka denga muchimiro yokumbozorora, yakaitwa pakati okuwedzera zvinhu. Zvinofanira kunyatsoona kuti mwando asingadi kuchadonha pasi pamadziro echivako chacho, uye akanzi kurudyi nzvimbo.
The tightness of flooring zvinoumbwa vose zvakafanana dobornyh zvinhu. Ivo ugopfiga pedenga akatevedzana uye kumugumo padenga. Somugumisiro, mashoko mwando anofanira iyerere iri achida mirayiridzo.
Cherechedzai inofanira kubhadharwa kuti kugera Ondulina pamakona pa majoini. Nei uchifanira kuitwa?
Sezvo evroshifer machira vakaprofita, panguva kubatana vazvo vari akaumba gobvu. Under izvi zvinogona zvinopfuura chando, iyo kana pachena kuti vakuchidzire richisimuka kubva imba anotanga zvinonyauka; mvura anowana pasi denga remba.
Cut chimiro pamakona zvishoma makobvu vazvo, mauri chando pasi pabhodhi haingasviki pinda.
zano rinobatsira kugadzwa Ondulina
Sezvambotaurwa, evroshifer chokugadza iri nyore chaizvo. Paiitwa basa hakurevi zvakaoma uye kudhura midziyo, zvakakwana kuva ruoko jeko, sando uye tepi nechiyero. Naizvozvo, kana sezvo nemakadhibhokisi ukasarudza onulin - achiisa hazvizombofambiri kukuita zvakaoma yakawandisa.
Asati kuisa denga remba, jira rimwe nerimwe tara mumwe crayon kana zvechinguvana. Izvi zvinogona racho rikurumidze rokutema anodiwa zvidimbu. Kwete kupedza nguva yakawanda ari kuyerwa jira rimwe nerimwe, dombo residues vanogona kucheka muenzaniso kuti vapfuudzire nekuita yasara pezvokuvamba markup.
Kudimburira ondulin unogona vanhuwo hacksaw huni (mazino diki). Kana chinozadzwa rakabayirwa denga remba, zvinofanira lubricated. Uyewo, zvinangwa izvi, unogona kushandisa raundi kana wemagetsi dzawaona pamwe carbide mokugezera pamusoro disk.
Vanounganidza ondulin inofanira kuva pane imwe tembiricha rworwendo 0 kusvika 30. In frosty okunze mashoko hunowedzera pfava, pane mukuru ndingangokuvara makatsemuka. The zvikuru Kupisa kurigamuchira machira, uye kana vari wakaiswa vagumirwe, pashure kutonhora mashoko unogona kutsemuka.
Kufamba akapoteredza ukapisa murwi machira kuva shangu munyoro inotsika, achipindira chete pamusoro convex wave.
Tinovimba munyaya ino uchawana mashoko aunoda. Rombo rakanaka kwamuri uye nyore kugadzira!
The France meimba - zvinhu uye michina
Kuti tibatsire muvaki: uremu uye kukura ane I-danda
Garden Kusviba. Tinofunga, tenda, kuvaka
How kushandisa raive nebutiro namira raive nebutiro Wallpaper apo gluing?
How kuita ruzha kuputira mukamuri: a mazano mashoma
Ruzhowa mari muRussia uye munyika chepamusoro, mamiriro wongororo. Ruzhowa mari - zvinoita ...
Yaitsiva tiwedzere arrester. The anowedzera kana murazvo arrester: riri nani?
How kupomba venhau musikana?
Husinganzwisisiki fluorite. zvivako ibwe
Atheroma: kurapwa kumba. Folk mishonga nokuti nokurapa atheroma
The yakanakisisa nounhu munhu senzira yokuwana mufaro uye kurarama kwenguva refu
Peptide zvizoro - chii? Anodzokorora cosmetologists uye vanoshandisa
KrAZ-260 - rori Universal
Yomutero senga masangano. Optimization nzira.
Nzira yekubika nyemba sei?
How kukura rwebhuruu irises. mhando irises